ओली र प्रचण्डलाई इतिहास पुरुष बन्ने अवसर - Dainik Nepal
ओली र प्रचण्डलाई इतिहास पुरुष बन्ने अवसर
ई. सञ्जीव रोकाहा २०७४ कार्तिक २७ गते ११:१७
– ई. सञ्जीव रोकाहा
ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान घोषणा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामी अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको संघारमा पुगेका छौं । दुई चरणमा निर्वाचन गरिने निर्णय बमोजिम निर्वाचनको दिन नजिकिँदै जाँदा नेपाली समाज राजनीतिमय बनेको छ । यद्यपि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मतपत्र सम्वन्धिको फैसला लगायत अन्य केही कारणहरुले केही दिन अघिसम्म निर्वाचन नै शंकाको घेरामा थियो । झन् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बनेको गठबन्धनले सत्ता गठबन्धनलाई झट्का त दिने नै भयो । ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुसहित अन्य दल मिलेर बनेको संयुक्त बाम गठबन्धन र उक्त गठवन्धनको राजनैतिक प्रभाव रोक्न सत्ता गठबन्धन यतिबेला भरपुर लागेको छ ।
करिव ६५ प्रतिशत कम्युनिष्टहरु भए पनि टुक्रा टुक्रामा रहेका कम्युनिष्टहरुलाई जुधाएर त्यसको फाइदा काँग्रेसले लिँदै आएको थियो ।
प्रदेश नं. २ मा विशेष प्रभाव राख्ने मधेश केन्द्रीत राजनैतिक दलको लोकतान्त्रिक गठबन्धन संगको सहकार्यलाई केही दिन अघिसम्म सम्भावित नयाँ समिकरणको रुपमा हेरिए पनि आजका दिनसम्म आइपुग्दा आ–आफ्नो बाटो समातिसकेको मार्गचित्र स्पष्ट देखिन्छ । यसरी मुलुकमा पछिल्लो समय बनेका राजनैतिक गठबन्धनहरुको निर्माणले कम्तीमा दिगो र स्थायी सरकार निर्माण गरी समृद्ध मुलुक बनाउने चाहनामा ठूलो भूमिका निर्वाह हुने कुरामा जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । तर, लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नेताहरुले बाम गठबन्धनलाई लगाएका केही आरोप मिथकमात्रै देखिन्छन् । आरोपको औपचारिक प्रारम्भ नेपाली काँग्रेसले घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेसँगै भएको हो । काँग्रेस जस्तो आफूलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाचीको रुपमा व्याख्या गर्ने राजनैतिक दलबाट लोकतन्त्रको सदुपयोग गर्दै दिगो र स्थायी सरकार निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने भावनाका साथ अघि आएको बाम गठबन्धनलाई टिकाटिप्पणी गर्नु उसको राजैनैतिक धर्म एवं चुनाव केन्द्रीत अभिव्यक्ति हुन सक्ला तर यसका पछाडि अन्य धेरै कुराहरु समेत लुकेको छ ।
यथार्थमा गत स्थानीय निकायका निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई मात्र आधार मान्ने हो भने आगामी निर्वाचन पछाडि प्राप्त हुने जनादेशले नेपाली काँग्रेस इतिहासमै कमजोर बन्ने निश्चित देखिन्छ । त्यसैले संकटको यो घडीमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निमित्त काँग्रेसले आत्तिएका अभिव्यक्तिहरु बाहिर ल्याएको छ । ०४६ सालको परिवर्तन पश्चात लामो समय मुलुकको नेतृत्व गरेको राजनैतिक दलले आज आफूलाई सबैभन्दा असुरक्षित महसुस गरेको छ । करिव ६५ प्रतिशत कम्युनिष्टहरु भए पनि टुक्रा टुक्रामा रहेका कम्युनिष्टहरुलाई जुधाएर त्यसको फाइदा काँग्रेसले लिँदै आएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा कम्युनिष्टहरु अग्रपंक्तिमा रहेता पनि सत्ता निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण समयमा एउटा दललाई उपयोग गरि अर्को दललाई निशेष गर्ने दाउपेचमा काँग्रेस लागि रह्यो । यसरी सरकार निर्माण गर्न नसकेका कारण राज्यले विकासको गति लिन सकेन र परिवर्तनहरु केवल कागजी शव्दमा मात्र सीमित रहे ।
आज सन् २०३० सम्म मुलुकलाई विकसित मुलुक बनाउने साझा राष्ट्रिय लक्ष्य हाम्रा सामु छ भने लाखौँ बिदेसिएका युवाहरुबाट प्राप्त रेमिट्यान्सका आधारमा मुलुक धानिएको यथार्थ अगाडि छ । समयमा नै दिगो अर्थव्यवस्था कायम गर्न रोजगारउन्मुख राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु ल्याई युवा पलायनलाई रोक्न नसके हामी अझ पछाडि धकेलिने निश्चित छ । बजेट बिनियोजनमा उल्लेख भए बमोजिमको बिकास खर्च हुन एकातिर सक्दैन भने अर्काेतर्फ हाम्रा गाउँघरका बाटो, बिजुली, खानेपानी लगायतमा केही सुधार देखिन्न । राजधानी लगायत प्रमुख शहरहरुमा बढ्दोे बातावरणीय प्रदुषण र यसले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव कहालीलाग्दो छ । एकातर्फ राज्यको बजेट खर्च हुन सकेको छैन् अर्काेतर्फ साँघुरा र कम बाटोका बाटोका कारण सवारी साधनमा हामी घन्टौँ जाममा फसिरहेका छौँ ।
वाम दलहरु मिलेनन् भनेर गाली गर्नेहरु हामी नै हौं । अब नेताहरुलाई गाली होइन्, वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाई मतले विजयी गराऔं । त्यसो हुँदा उनीहरु आफै ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन् ।
केही नयाँ सोचका साथ कुनै ठाउँबाट कामको थालनी भयो भने अख्तियार या अदालतको हवला दिँदै रोक्ने प्रपञ्च हाम्रा नियमित कामै भएका छन् । समाजमा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रहरी संरचना एंव स्थायी सरकारको रुपमा चिनिएको कर्मचारीतन्त्र पूर्ण राजनैतिक हस्तक्षेपको शिकार बनेको छ । आखिर यी र यस प्रकारका समस्याहरु राजनैतिक स्थिरताको अभावमा सिर्जना समस्याहरु दिगो सरकार निर्माण हुनासाथ न्यूनीकरण हुँदै जाने छन् । दुई वटा ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै अगाडि बढ्दा हामीलाई हाम्रा लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिँदै बृहत पूर्वाधार निर्माण गरी सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ निर्माण भएको बाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत अगाडि सारेको मोडलबाट साँच्चै मुलुकले समृद्धिको बाटो पहिल्याउने निश्चित छ । जलजमीन, जंगल, खनिज निजी उद्योग, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको उचित व्यवस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई प्राथमिकतामा राखी एकताबद्ध अगाडि बढ्नु नै हामी सबैको आजको आश्यकता हो ।
तसर्थ ढिलै भए पनि इतिहासले एउटा मौका दिएको छ । वाम दलहरु मिलेनन् भनेर गाली गर्नेहरु हामी नै हौं । अब नेताहरुलाई गाली होइन्, वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाई मतले विजयी गराऔं । त्यसो हुँदा उनीहरु आफै ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन् । जनमतलाई सम्हाल्ने काम भने केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुपर्छ । आशा छ, यी नेताहरुले इतिहास पुरुष बन्ने अवसर गुमाउने छैनन् ।